एमाले माओबादी पार्टी एकतामा ‘ब्रेक थ्रू’, ३ बर्ष पछि ओली हट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ! – Nepali Profile
एमाले माओबादी पार्टी एकतामा ‘ब्रेक थ्रू’, ३ बर्ष पछि ओली हट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड !
काठमाडौँ, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत पार्टीमा आफ्नो हैसियत कमजोर हुन नदिन एमालेसँग बराबर हिस्सा माग्दै आईरहेका थिए ।केपी ओलीले प्रचण्डका मागहरु पूरा गरिदिने सहमति जनाएपछि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने स्थिति बनेको हो ।
प्रचण्ड र ओलीबीच केही सहमति भएका छन्, जसका बारेमा दुवै पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई मात्र जानकारी दिइएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई २ वर्षपछिको अध्यक्ष ग्यारेन्टी गर्न सकेनन् । तर, तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न भने सहमति जनाएका छन् ।
दुवै पार्टीका नेताहरुले बाहिर नल्याए पनि ओली र प्रचण्डबीच केही विषयमा भद्र समझदारी भएको छ ।
प्रचण्डको मुख्य चासो रहेको केन्द्रीय कमिटीमा बराबरीको हैसियतलाई ओलीले अधिकतम सम्बोधन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।